Iinkcukacha zeNkokeli - Element 82 okanye Pb
Iikhompi zeNkokeli kunye neZakhiwo zePhysical
Inkokeli yinto enxinxisayo yensimbi, eqhelekileyo edibeneyo ekukhuselweni kwemisebe kunye ne-alloys soft. Nantsi iqoqo lezinto ezithakazelisayo malunga nokukhokela, kuquka iipropati zayo, ukusebenzisa kunye nemithombo.
Intshisekelo yeNkcazo ebalulekileyo
Inkokeli yinto ebanzi kakhulu kuba yiphelo lokuqhwala kwezinto ezininzi ezinama-radioactive ezinama-athomu aphezulu.
Ngenxa yokuba kulula ukukhipha (isinyithi), isetyenzisiwe sisetyenziswe ukususela kwixesha lokuqala. Inkokheli yayifumaneka ngokulula kubantu abaqhelekileyo kwiBukhosi baseRoma, bafumana ukutya kwiitya, iplumbing, iimali zemali, kunye neetatu. Abantu basebenzise izinto zansuku zonke ngamawaka eminyaka, de kube ukuba ekugqibeleni ifunyenwe ibe yingozi ngenxa ekupheleni kwekhulu le-19.
I-Tetraethyl khokelo yongezwa kwipetroli yokunciphisa injini engqongqo kwiminyaka ye-1920. Nangona xa kwakhiwa, kwaziwa ngokuba yingozi. Abasebenzi abaninzi befrikansi babulawa ngokusasazwa. Nangona kunjalo, i-gesi eholelekileyo ayizange iphindwe kude kube ngowe-1970 okanye ivinjelwe ukusetyenziswa kwizithuthi zendlela ukuya ngo-1996. Isinyithi sisasetyenziswa kwiibhetri zeemoto, ngokwenza i-glass lead, kunye ne-radiation shielding. Imveliso yomhlaba wonke kunye nokusetyenziswa kwesinyithi iyaqhubeka nokwanda.
Inkokeli yintsimbi yokutshintsha. Akunjengezenzo ezinjengezinye izitye, ngaphandle kwimeko epholileyo. Ibonisa utywala obunamandla obuncibilikiweyo, ngokuqhelekileyo ukudala izibophelelwano ezidibeneyo kunye nezinye izinto. Iqumrhu lizibophelela ngokukhawuleza, lenze amasongo, ietyunithi, kunye ne-polyhedron. Ngokungafani nesinyithi ezininzi, ukukhokela kuyithambile, kuyincinci, kwaye ayikuhle kakhulu ekuqhubeni umbane.
Umkhombe okhuphayo uvutha ngotangatye omhlophe. Isinyithi esenziwe ngopolisi siyi-pyrophoric.
Ipolisi ekhokelela ngokwenene i-graphite ifomu yekhabhoni, kodwa insimbi yentsimbi ithambile ngokwaneleyo ukushiya uphawu. Inkokheli yayisetyenziswe njengento yokuqala yokubhala.
Iikhompyutheni zezikhokelo zithandekayo. I-acetate ye-Leader ibizwa ngokuba "iswekile yesikhokelo" yaye yayisetyenziswe njengothambileyo kwixesha elidlulileyo.
Kwixesha elidlulileyo, kwakunzima kubantu ukuba bathethe i-tin kwaye baholele ngaphandle. Baye bacingelwa ukuba ziintlobo ezimbini zezinto ezifanayo. Inkokheli yayibizwa ngokuba yi "plumbum nigrum" (ibhola elimnyama) ngelixa itata ibizwa ngokuba yi "plumbum candidum".
Iinkcukacha ze-Atomic Data
Igama le-Element: iNkokeli
Inomic Number: 82
Ubunzima be- Atom : 207.2
Iqela leQela : I- Basic Metal
Ukufumaniseka: Kuyaziwa kumadala, kunye nembali ehamba emva kweminyaka engama-7000. Kukhankanywe kwincwadi kaEksodus.
Igama Umthombo: i- Anglo-Saxon: khokela; isimboli kwisiLatini: iplumbum.
Ubuninzi (g / cc): 11.35
I-Melting Point (° K): 600.65
Indawo yokubilisa (° K): 2013
Iipropati: Inkokeli yinto ephoxisa kakhulu, enamandla kakhulu kunye ne-ductile, umqhubi wombane ongekhoyo, onqabile ukubola, isinyithi esimhlophe esibhakabhaka esicwebezelayo esiqhaqhazelayo. Inkokeli yodwa yinyithi apho kukho i-zero Thomson. Inkokeli yintyhefu yokongeza.
I-Atomic Radius (pm): 175
Umthamo we-Atomic (cc / mol): 18.3
I-Covalent Radius (pm): 147
I-radion Radius : 84 (+ 4e) 120 (+ 2e)
Uhlobo oluthile (@ 20 ° CJ / g mol): 0.159
Ukufudumala kwe-Fusion (kJ / mol): 4.77
I-Evaporation Heat (kJ / mol): 177.8
Thabatha Ukushisa (° K): 88.00
Inombolo ye-Pauling Negativity: 1.8
I-Energy First Ionisation (kJ / mol): 715.2
Amazwe okuxhoma : 4, 2
Uqwalaselo lwe-elektroniki : [Xe] 4f 14 5d 10 6s 2 6p 2
Ukwakhiwa kwamathambo: iCubic-Cubic (FCC)
I-Lattice Constant (Å): 4.950
Isotopes: Umkhokelo wemvelo ngumxube we-isotop ezine ezinezintlu: 204 i- Pb (1.48%), i- 206 i- Pb (23.6%), i- 207 i- Pb (22.6%) kunye ne- 208 i- Pb (52.3%). Amanye ama-isotopes angamashumi amabini anesixhenxe ayaziwa, yonke i-radioactive.
Ukusetyenziswa: Inkokeli isetyenziswe njengomsila ozwakalayo, i-shield ye-radiation, kwaye ufumane ukunyakaza. Isetyenziselwa ukuloba iinqwelo, ukugubungela ama-wicks kwezinye ikhandlela, njenge-coolant (i-lead molten), njenge-ballast, kunye ne-electrodes. Iikhompyutheni zezikhokelo zisetyenziswe kwiipayipi, inambuzane, kunye neetteries. I-oxide isetyenziselwa ukwenza i-crystal 'kunye neglasi egqityiweyo. I-alloys isetyenziselwa i-solder, i-pewter, uthayiphe isinyithi, iibhola, i-shot, i-lubricants, kunye ne-plumbing.
Imithombo: Inkokeli ikhona kwimo yayo yasekuhlaleni, nangona ayinqabile. Inkokeli inokufumaneka kwi-galena (PbS) ngenkqubo yokugcoba. Ezinye izimbiwa eziphambili eziqhelekileyo ziquka i-anglesite, i-cerussite kunye ne-minim.
Ezinye izinto: Izazi zakwa-Alchemist zikholelwa ukuba zikhokelela kwi-metal endala. Kwakunxulumene nomhlaba uSaturn.
Ulwabiwo lweeMetric Units
Ezilishumi Izinto Ezinkulu Ngama-Aries
Oh santa noche ('O Obusuku Ubusuku' eSpanish)
I-Steam kwi-Industrial Revolution
Ukutshata kunye Nomtshato Isigama ngesiNgesi
Dewa mata - Iimpawu ezilula zaseJapane
I-RollerGards Ngaba yindlela yokuzonwabisa yokukhusela i-Skate Blades
Gcina Izandla Zakho Zifudumele Ngethuba
I-Halloween eHorry Horror Movies
Ziziphi Izinto ezithandekayo kwiZakhiwo?